Football Khabar » नथाम्ने भो ‘मेस्सीको माया’ले, बार्सिलोना स्वारेजको विकल्प खोज्न तयार !
नथाम्ने भो ‘मेस्सीको माया’ले, बार्सिलोना स्वारेजको विकल्प खोज्न तयार !
क्लबको भविष्यलाई ध्यानमा राख्दै स्पेनिस बार्सिलोना आफ्ना स्टार उरुग्वेन फरवार्ड लुइस स्वारेजको विकल्प खोज्न तयार देखिएको छ । ३२ वर्षीय स्वारेजको बढ्दो उमेर र खस्किँदो प्रदर्शनबाट चिन्तित हुँदै आएको बार्सिलोनाले समर सिजनबाटै उनको स्थान लिने भरपर्दा युवा खेलाडी खोजी गर्ने भएको छ । यस्तो रिपार्ट स्पेनिस पत्रिका ‘मुन्डो डेपोर्टिभो’ले छापेको छ ।
बार्सिलोनाले स्वारेजलाई सन् २०१४ को विश्वकपपछि इंग्लिस क्लब लिभरपुलबाट अनुबन्ध गरेको थियो । त्यसयता बार्सिलोनाको आक्रमण लाइनमा एक प्रमुख खेलाडीका रूपमा रहँदै आएका स्वारेज यो सिजन उत्कृष्ट लयमा रहेनन् ।
त्यसमा पनि युरोपियन च्याम्पियन्स लिगमा उनले लगातार खराब प्रदर्शन गर्दा बार्सिलोना चिन्तित छ । घरेलु प्रतियोगितामा सन्तोषजनक प्रदर्शन गरे पनि स्वारेज च्याम्पियन्स लिगमा निष्प्रभावी हुँदै आएका छन् ।
स्वारेजले पछिल्ला ३ वर्षमा च्याम्पियन्स लिगमा मात्रै ५ गोल गरेका छन् । उनले सबै गोल बार्सिलोनाको घरेलु मैदान क्याम्प नोउमै गरेका छन् । स्पेनबाहिर उनले च्याम्पियन्स लिगमा सन् २०१५ बाटै गोल गर्न सकेका छैनन् ।
युरोपको ठूलो प्रतियोगितामा एक स्टार खेलाडीको यस्तो खराब तथ्यांकबाट बार्सिलोना चिन्तित छ । जारी सिजन बार्सिलोना च्याम्पियन्स लिगबाट लिभरपुलसँग समग्रमा ४–३ ले पराजित हुँदै बाहिरिँदा स्वारेजले क्याम्प नोउमा गोल गरे पनि समग्रमा उनको प्रदर्शन खराब रह्यो ।
आगामी सिजनहरूलाई थप सुरक्षित पार्न र टोलीमा युवा खेलाडी उभ्याउन पनि बार्सिलोनाले स्वारेजलाई बेच्न चाहेको चर्चा सरुवा बजारमा छ । तर, बार्सिलोनाका कप्तान लिओनल मेस्सी स्वयं भने स्वारेजलाई क्लबले बेचोस् भन्ने पक्षमा देखिँदैनन् ।
स्वारेजसँग व्यक्तिगत र पारिवारिक रूपमा सुमधुर सम्बन्ध रहेकाले मेस्सी उनलाई टिममा सुरक्षित गर्न चाहन्छन् । यो कुरा विगतदेखि नै प्रष्ट देखिँदै आएको छ । केही समयअघि पनि मेस्सीलेले क्लबलाई स्वारेज बेच्ने निर्णय नलिन अनुरोध गरेको खबर बाहिरिएको थियो ।
बार्सिलोना अहिले एथ्लेटिको मड्रिड छाड्ने घोषणा गरेका एन्टोनी ग्रीजम्यान भित्र्याउने तयारीमा रहेको चर्चा छ । त्यसैगरी, जर्मन क्लब फ्रान्कफुर्टका युवा फरवार्ड लुका जोभिकलाई समेत बार्सिलोनाले ताकिरहेको छ ।
पछिल्लो समय जोभिकसँग रियल मड्रिडले डिल फाइनल गरेको रिपोर्ट आए पनि हालसम्म ठोस निर्णय भइसकेको छैन । तसर्थ, बार्सिलोना अझै पनि सर्बियन युवा फरवार्डलाई क्याम्प नोउ उतार्ने दौडमै देखिन्छ ।
यो बताइन्छ कि, फ्रान्कफुर्टले जोभिकका लागि महँगो रकम माग गरेपछि रियल पछि हटेको छ ।
प्रकाशित मिति ७ जेष्ठ २०७६, मंगलवार १५:५१